कसरी रूस मा प्रस्तावित जरिवाना यातायात प्रहरी पुनरावेदन गर्न सिक्न आज। र सामान्य मा, यो सम्भव छ कि छैन भनेर बाहिर यस कार्यका कुनै पनि समस्या बिना बोक्नु त। किनभने असल छुट्टी त्रुटिहरू कुनै एक प्रतिरक्षा छ। हरेक नागरिक दृश्य आफ्नो बिन्दु को रक्षा गर्ने अधिकार छ। तसर्थ, चुनौती ठूलो मांग मा ट्राफिक प्रहरी जरिवाना प्रयोग थियो। जो सुविधाहरू कार्य अघि हरेक नागरिक थाहा हुनुपर्छ? कसरी प्रक्रिया को लागि तयार? कि एक विशेष मामला मा राम्रो विरुद्ध पुनरावेदन गर्न एक वास्तविक मौका छ? यो सबै पछि व्याख्या गरिनेछ। वास्तविकता मा, कुरा छैन यो देखिन्छ ताकि सरल छन्। तर अध्ययन अन्तर्गत प्रक्रिया को उचित तयारी संग समस्या धेरै लिन गर्दैन।
त्यहाँ एक सही छ
पहिलो कुरा ट्राफिक प्रहरी जरिवाना हुन सक्छ अपील गर्ने कि नगर्ने पत्ता लगाउन छ। यो प्रश्नको जवाफ सरल छ - हो, हरेक नागरिक यस्तै मौका छ। पहिले नै उल्लेख रूपमा, रूस दृश्य आफ्नो बिन्दु रक्षा गर्न सक्षम छ। तसर्थ, पुनरावेदन ठाउँ लिन्छ। तर केवल केही नियमहरू अन्तर्गत।
तिनीहरूलाई एक धेरै। र आफूलाई चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साधारण भनिन्छ गर्न सकिँदैन। तसर्थ, चालक अग्रिम र सही तयार गर्नुपर्छ। आखिर, तिनीहरूले आफ्नो निर्दोष साबित हुनेछ।
खैर, यातायात को राम्रो कुनै पनि प्रस्ताव पुनरावेदन गर्न। उहाँले discharged थियो कसरी कुनै कुरा - व्यक्ति वा क्यामेरा को माध्यम द्वारा कर्मचारी। मुख्य कुरा त्यहाँ सधैं गैरकानुनी fining को likelihood छ भन्ने छ। त्यसैले हरेक नागरिक प्रक्रिया बारे थाहा हुनुपर्छ?
उदाहरणका लागि, महत्वपूर्ण कुरा पेनाल्टी र ऋण को एक नागरिक को उपस्थिति जाँच गर्न छ। कहिलेकाहीं सूचना गल्तीले आउँछ। र वास्तवमा, एक कुनै पनि उल्लंघन छैन।
यातायात जरिवाना जाँच मिति धेरै विधिहरू द्वारा बाहिर छ। अर्थात
ट्राफिक प्रहरी व्यक्तिगत अपील।
पहिलो मामला परिदृश्य व्यवहार मा अक्सर हुन्छ। यो तपाईं घर छोडेर बिना ऋण सिक्न गर्न अनुमति दिन्छ। इन्टरनेट सेवा को एक विस्तृत विविधता प्रस्ताव माथि असल को उपलब्धता जाँच गर्न।
लोकप्रिय पोर्टल "सार्वजनिक सेवाहरू" र "Sberbank अनलाइन"। प्रयोगको मार्ग मा ट्राफिक जरिवाना जाँच गरिन्छ। नागरिक भुक्तानी विवरण संग सबै ऋण जानकारी दिइनेछ। अन्य कुराहरु, यी सेवाहरू राम्रो भुक्तानी गर्न प्रस्ताव। तर तपाईं चुनौतीपूर्ण मा संलग्न गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो प्रक्रिया आवश्यक छैन।
ऋण जाँच गर्नुहोस्: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
अब बारेमा इन्टरनेट ऋण जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कसरी एक सानो। चरण पुस्तिका द्वारा चरण यो सुविधा संग सम्झौता गर्न मद्दत गर्नेछ। यो चरण यदि गलत तरिकाले दोकान को एक likelihood छ लिन प्रस्तावित छ। वा भुक्तानी आदेश हराएको छ जब।
निम्न तरिका सञ्चालन गरिएको छ यसको "सार्वजनिक सेवाहरू" मार्फत ट्राफिक प्रहरी जरिवाना जाँच गर्नुहोस्:
को नागरिक पोर्टल gosuslugi.ru गर्ने अधिकार छ।
"सेवा" जाने - "। जरिवाना यातायात प्रहरी"
"फ्री जागरूकता।" चयन
क्लिक गर्नुहोस् "सेवा प्राप्त गर्नुहोस्।" खोज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एक नागरिक गर्न र पोर्टल मा आधिकारिक गरिएको छैन, तिनीहरूले दाता मा डाटा प्रविष्ट गर्न प्रेरित गरिनेछ। फील्ड भर्न, त्यसपछि पर्छ "जाँच गर्नुहोस्"।
यातायात जरिवाना सबै भुक्तानी प्रणाली संग स्क्रिनमा देखिन्छ। तिनीहरूले के भने, नागरिक एक संवाददाता सन्देश देख्नु हुनेछ। यो समाधान गर्न उचित छ। उदाहरणका लागि, एक "छापा पर्दा" बनाउन।
त्यसै गरी, ऋण "Sberbank अनलाइन" को माध्यम द्वारा गरीएको छ। यदि ऋणी को आधार फेला परेन, र राम्रो संग भुक्तानी प्रणाली छ, यो सरल पुनरावेदन गर्न। जब, यो भुक्तानी ठाउँ लिन्छ कि बाहिर जान्छ जाँच पछि, आफ्नो निर्दोष साबित गर्न हुनेछ। र राम्रो पुनरावेदन गर्न त ट्राफिक गाह्रो हुन्छ को। तर अझै पनि सम्भव। विशेष गरी सही तयारी प्रक्रिया गर्दा। के हेर्न?
विशाल भूमिका हरेक नागरिक दोकान एक अपील लागि लागू गर्न योग्य छ जसमा अवधि द्वारा प्ले भन्ने तथ्यलाई। तपाईं यसलाई सम्झना छ भने, तपाईं प्रदर्शन भुक्तानी आदेश भुक्तानी गर्न हुनेछ।
मिति, एक दण्ड (इन्टरनेट व्यक्ति मार्फत वा) ट्राफिक प्रहरी अपील मात्र यसको रसिद 10 दिन भित्र सम्भव छ। त्यो रूपमा चाँडै offender को स्थापना नमूनाको सत्तारूढ यातायात को हात मा हुनेछ, यो आफ्नो स्थिति प्रमाणित गर्न ती वा अन्य शरीर गर्न निर्धारित तरिका लागू गर्न सक्षम हुनेछ, छ। निर्दिष्ट समय पछि, दायाँ नष्ट चुनौती। त्यसैले, तपाईं हतार गर्नुपर्छ।
यो लक्ष्य मिति कुनै पनि यातायात जरिवाना लागि सान्दर्भिक छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। कुनै कुरा तिनीहरूले discharged थिए कसरी - को निरीक्षक को मद्दतले वा क्यामेरा द्वारा। मुख्य कुरा सबै अवस्थामा उहाँको निर्दोष रक्षा मात्र 10 दिन छ भन्ने छ।
र के मा अधिकारीहरु एक विशेष मामला लागू गर्न सक्नुहुन्छ? असल प्रहरी कहाँ पुनरावेदन? रूस मा, यो उपचार को लागि धेरै ठाउँमा प्रदान गर्दछ। नागरिक आफूलाई कहाँ जाने चयन गर्ने अधिकार। सामान्यतया, धेरै स्थिति मा निर्भर गर्दछ।
अपील बाहिर हुन सक्छ:
को pretrial क्रममा। सामान्यतया, यो संकल्प संग एक नागरिक ट्राफिक प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरी, भुक्तानीको लागि एक रसिद लेखे जो बुझाउँछ।
अदालत मा। थप विशेष, आफ्नो जिल्ला कार्यालयमा। सामान्यतया, समस्या साई मा हल छैन भने यो विकल्प उपयुक्त छ।
त्यहाँ समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुनै अन्य शरीर हो। नियम, धेरैले ट्राफिक प्रहरी जानको लागि र तुरुन्तै अदालत जाने रुचाउँछु। विशेष गरी यदि राम्रो जारी छ निरीक्षक DPS।
क्यामेरा र जरिवाना
ध्यान अरू के गर्नुपर्छ? पहिले, केवल एक प्रहरी देखे जो उल्लंघन लागि दोकान। तर प्रगति अझै पनि खडा गर्दैन। र अब, चालक अक्सर "जरिवाना क्यामेरा बाट।" आउन तिनीहरूले वास्तवमा violators पठाइएको स्वतः जारी, र त्यसपछि छन्।
यी मौद्रिक पेनाल्टी पनि, धेरै कठिनाई बिना चुनौती गर्न सकिन्छ। विशेष गरी वास्तवमा छैन को एक नागरिक दोषी भने। हामी क्यामेरा को प्रकार, "सुरक्षित शहर" 100% वास्तविक पेनाल्टी दिनको लाग्छ हुँदैन। पनि ट्राफिक प्रहरीले हाल चालक सधैं कानूनी सूचना हो भन्छन्।
मिति, क्यामेरा निम्न उल्लंघन रेकर्ड गर्न सक्षम छन्:
सार्वजनिक परिवहन लागि सडक खण्डहरू मा आन्दोलन;
speeding सडक केही खण्डहरू मा;
रातो प्रकाश मा लाइन पार;
seatbelts को अभाव (belted);
को आगमन लेन मा यात्रा।
यो रेकर्ड infringements पूर्ण सूची छैन। कैमरों देखि जरिवाना चालक तर्साउन हुँदैन। तिनीहरूले अन्य सबै रसिद जस्तै तरिकामा अपील अधीनमा छन्। मात्र कुरा भुक्तानी गर्नुपर्छ ध्यान - यो कब्जा छवि छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
लेखन बयान लागि नियम
उजुरी (दावी) बनेको कसरी उजागर भुक्तानी क्रममा महत्वपूर्ण विन्दु हो। यो nuance चालक विशेष ध्यान गर्नुपर्छ। आखिर, दावी फाइल गर्न गलत दृष्टिकोण व्यापार मा एक हानि नेतृत्व हुनेछ।
वास्तवमा, यातायात जरिवाना को अपील (नमूना कार्य पछि पेश गरिनेछ) कुनै उजुरी धेरै फरक छ। एउटै नियम कागजात विषय।
थप विशेष, यो नागरिक दण्ड चुनौती कार्य लेख्दा कार्यहरू केही अनुक्रम पछ्याउन छ। अर्थात
पृष्ठ को माथिल्लो दायाँ कुनामा पहुँच छ जो शरीर, नाम हिज्जे सुनिश्चित। यसलाई यातायात प्रहरी वा न्यायाधीश को टाउको को नाम निर्दिष्ट गर्न मनमोहक छ।
सन्दर्भ अधिकार तल, ड्राइभर बारेमा लेख्छन्। को हस्ताक्षरहरू (FI हे), साथै सम्पर्क संचार र दर्ता शहर जन्मदिन संग को लागि संकेत निश्चित हुनुहोस्।
पानामा को बीचमा शब्द "उजुरी" वा "दावीको कथन" हिज्जे गर्न। यो सबै जहाँ कागजात पठाएको छ मा निर्भर गर्दछ। अदालत दोस्रो लेखिएको दृष्टिकोण भने। यातायात पहिलो embodiment लागि उपयुक्त।
अर्को अनुप्रयोगको मुख्य भाग आउँछ। यो वादी संक्षेप, तर दावी को सार विवरणहरू गर्नुपर्छ। को उजागर दण्ड (संकल्प नम्बर) बारे प्रविष्ट डाटा, साथै दावी विवरणहरू। त्यो निर्दोष छ किन - मानिस दृश्य को आफ्नो कुरा वर्णन गर्दछ।
मुख्य शरीर एक औचित्य चालक र निर्दोष रूपमा लागू गर्ने कागजात र प्रमाण सबै स्थानान्तरण गर्न चाहेको छ पछि। यो पनि निर्दिष्ट गर्ने सबै जो घटनाहरूको पाठ्यक्रम असर गर्न सक्छ हस्ताक्षरहरू र सम्पर्क विवरण साक्षी, को (सूचीमा) सिफारिस गरिएको।
अन्तिम भाग मा हस्ताक्षर र स्थापित नमूनाको अनुप्रयोगको दाखिला को मिति गरिनेछ।
निम्न यो तर्कको, हामी सजिलै कसरी अदालत वा यातायात प्रहरी मा प्रस्तावित जरिवाना यातायात प्रहरी पुनरावेदन गर्न बुझ्न सक्छौं। तर अन्य के सुविधाहरू मा तपाईं सिक्न छ? कार्य को हरेक नागरिक को निर्णय अघि विशिष्ट के कदम लिएको हुनुपर्छ?
इन्टरनेट मार्फत लागू
हालै, सार्वजनिक "सार्वजनिक सेवाहरू" मार्फत जरिवाना यातायात प्रहरी क्यामेरा अपील गर्न निमन्त्रणा छ। यो नवीनता अहिलेसम्म सबै क्षेत्रहरु प्रभावकारी हुन्छ। सामान्यतया, सञ्चालन ठूलो शहर वसोवास लागि मात्र सम्भव छ। उदाहरणका लागि, मास्को वा पत्रुस लागि। र सानो प्रान्तीय क्षेत्रमा अझै एक यस्तो सञ्चालन उपलब्ध छैन।
वास्तवमा, इन्टरनेटमा राम्रो ट्राफिक विरुद्ध एक अपील मा कार्यहरूको अनुक्रम सरल छ। उहाँले सामान्य कार्य धेरै फरक छैन। मुख्य समस्या - आफ्नो निर्दोष प्रमाण को प्रावधान। सबै सामाग्री कम्प्युटर लेखिएको एक स्वरूप परिवर्तित गर्न हुनेछ। अक्सर यो फोटो आउछ।
तपाईं सजिलै "सार्वजनिक सेवाहरू" मार्फत जरिवाना यातायात प्रहरी क्यामेरा अपील गर्न सक्छन्? यो गर्न, नागरिक हुनुपर्छ:
वेबसाइट "सार्वजनिक सेवाहरू" मा जानुहोस्। त्यहाँ अधिकार गर्न बाध्य छन्। तपाईं पछि तुरुन्तै यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर।
ट्राफिक प्रहरी जरिवाना खोजी गर्न। यो कसरी गरिन्छ पहिले नै भने गरिएको छ।
आगामी भुक्तानी बारेमा जानकारी हेर्नुहोस्। यो चरण मा, प्राधिकरण यसलाई कुनै ठाउँ थियो भने आवश्यक छ।
को "अपील" बटन क्लिक गर्नुहोस्। यो स्क्रिनको तल मा स्थित छ।
सबै क्षेत्रहरू साथै, प्रयोगकर्ता गर्न जारी गर्दै आफ्नो निर्दोष को अपलोड प्रमाण रूपमा।
पुनरावेदन गर्न आवेदन पठाउन। यो गर्न, बस एक विशिष्ट बटन क्लिक गर्नुहोस्।
वास्तवमा, त्यहाँ प्रक्रिया केही विशेष छ। मात्र धेरै नागरिकहरु इन्टरनेटबाट आवेदन को पेश्की अहिलेसम्म एक विशेष मांग छ कि दर्शाउन। तपाईं पार्किंग वा अन्य कुनै पनि उल्लंघन लागि ट्राफिक प्रहरी जरिवाना अपिल, प्रतिक्रिया गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो आफ्नै समस्या समाधान गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। यसलाई सही कार्यहरू यदि यति गाह्रो छैन।
यो के हो? के आफ्नो निर्दोष साबित गर्न नागरिक बनाउन आवश्यक छ? सबै ड्राइभरहरू प्रस्ताव छ क्यामेरा (कुनै पनि अन्य जस्तै) बाट दण्ड चुनौती। मुख्य कुरा यो प्रक्रिया को लागि एक आधार छ छ। यो साँच्चै यो वा त्यो उल्लंघन दोषी छैन हुन उचित छ। आखिर, हेर्नुहोस् को आफ्नो बिन्दु गर्न सक्षम हुनुपर्छ रक्षा गर्न। त्यस्तै, यो साबित गर्न रूपमा।
उजुरी आफैलाई फाइल र अवैध अप भुक्तानी गर्ने नागरिक पर्छ राख्नु आफैलाई छुटकारा गर्न:
आफ्नो निर्दोष प्रमाण भेला हुन्छन्। यो केहि हुन सक्छ। राम्रो अभिनय गवाही, साथै भिडियो र फोटो असल को illegality मा कुरा गर्न सक्छन् भनेर। उदाहरणका लागि, DVR तस्वीरहरू।
आवेदन फारम पठाउन र एक वा छलफलको लागि अन्य निकाय यसलाई पेश गर्नुहोस्। कागज गरेर मात्र घटनाहरूको पाठ्यक्रम असर गर्न सक्छ कि सबै सामाग्री गर्नु पर्छ।
निर्णय प्रतीक्षा गर्नुहोस्। को नागरिक अदालत अपिल भने, यो कार्यवाही मा एक बैठक तोकिएको गरिनेछ। यो आवश्यक कुनै पनि भने, साक्षी संलग्न। को दण्ड मा निर्णय वास्तवमा पेश कागजातहरूको आधारमा लगाएको।
एक अदालतले वाक्य प्राप्त। जब निर्दोष नागरिक साई मा सान्दर्भिक निकाल्ने अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। नियम, आफूलाई रिपोर्ट गरेका कोर्ट wrongly दोकान। त्यहाँ एक पूर्व-परीक्षण गरिएको छ भने, तपाईं बस पहिले आएको कागजात बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल वेवास्ता गरिएको छ।
सबै छ। सबैभन्दा समस्याग्रस्त कुरा एक नागरिक गरेको र निर्दोष प्रमाण सङ्कलन गर्न बस हो। असफल बिना यातायात को राम्रो विरुद्ध पुनरावेदन।
व्यवहार मा, यो प्रक्रिया झन् साधारण र प्राय भएको छ। प्रत्येक चालक आफ्नो मामला प्रमाणित गर्न एक वास्तविक मौका छ। यो एउटा काल्पनिक सम्भावनाहरू बारेमा छैन। तपाईं उल्लंघन स्थान लिएको छैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने, यो भुक्तानी गर्न छैन।
दावी एक नमूना
र नमूना ट्राफिक प्रहरी जरिवाना गरेर बाहिर लिखित अपील को writ कसरी देखिन्छ बारेमा अलिकति अब। को पहिले उल्लेख नियम संग राखन मा, तपाईं यस्तो दावी गर्न सक्छन्:
म, पहिले मलाई जारी यातायात जरिवाना को रद्द को मामला समीक्षा गर्न Ivanov इवान Ivanovich, (पासपोर्ट डाटा) अनुरोध। यो №XXXXXXX निर्णय बारे छ। मलाई द्वारा जारी कागजात अनुसार, म सडक Griga, 40 र Nansen 1 उर्दी सीसीटीवी क्यामेरा को मद्दतले लिइएका तस्बिरहरू आधारमा जारी बीच क्षेत्रमा 16:01 मा 15 मार्च 2008 को गति नाघ्यो।
वास्तवमा, यो समयमा मेरो कार मरम्मत भइरहेको थियो। मेरो प्रमाण मा सेवा केन्द्र सेवाहरूको प्रावधान लागि सम्झौता लागू गरियो। सम्पर्क विजार्ड मेरो कार, संलग्न काम गर्छ।
यसरी यो मुद्दा लाग्न सक्छ। यो अनुप्रयोगको मुख्य भाग को तयारी सामना गर्न मदत गर्छ जो सिर्फ एक टेम्पलेट छ। यस्तो योजना अनुसार सजिलै अदालत जरिवाना यातायात अपिल गर्न सकिन्छ।
Henceforth, यो एक विशेष मामला मा अगाडि बढ्न कसरी स्पष्ट छ। वास्तवमा, हरेक चालक अधिकार रक्षा गर्न र राम्रो को illegality प्रमाणित गर्न सक्षम छ। आधार पनि आदेश issuing गर्दा कर्मचारी खराब आचरणमा DPS रूपमा सेवा गर्न सक्छन्।
यो धेरै मान्छे इन्टरनेटबाट यातायात को राम्रो विरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्ने स्पष्ट छ। तर आफ्नै निर्णय मा मुद्दा संग सबै भन्दा राम्रो सम्झौता। मुख्य कुरा हो - को निर्धारित सीमा भित्र अनुप्रयोगको पेस्की "भेट्न।"
उत्तराधिकारी को क्रम: कानूनमा संग क्रम
उत्तराधिकारी र यसको शक्ति
व्यवस्था को नियम - कानून को एक आधारभूत तत्व हो
संघीय बीमा पर्यवेक्षण सेवा के गर्छ?
जब stalin जन्म भएको थियो र जब - जोसेफ Dzhugashvili
गुणस्तर ज्ञान प्राप्त को मुख्य प्रक्रिया रूपमा शैक्षिक गतिविधि को संरचना
IOS र अपरेटिङ सिस्टम: "Android" कसरी स्थापित गर्ने?
Iv Roshe: मास्को मा पसलहरूमा को ठेगाना। कस्मेटिक्स र perfumery
भाडामा एक घर: के, किन र कसरी
Sevastopol होटल: ठेगाना, विवरण, समीक्षा
कीमा बनाएको चिकन को व्यञ्जन -, सजिलो छिटो र स्वादिष्ट!
तोप "हलकी तरवार": प्राविधिक विनिर्देशों, परिमार्जन, र फोटो
लक्षण र लडाई तरिकाहरू: बिरालोहरु एलर्जी
Minecraft मा कार्ड स्थापना गर्ने बारे प्रश्न? तपाईं यहाँ!